ပန်ဒိုရာ: အလုံးများ အ၀ိုင်းများ
Posted by pandora at 1:00 AM
oh.. beads.. ooohhh!! nice!
ပုတီးလေးတွေ လက်ကောက်လေးတွေ လှလိုက်တာ။
5 Nov 08, 04:47
kom: ရွှန်းမီ က ဘိုလို တတ်တယ်နော်။
5 Nov 08, 04:46
kom: အတွေးတွေ တူနေကြပါလာ။ :P
kom: မွတ်စတာဖာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မွတ်စတာဖာ မှာ ဒီလောက် များတာ မမြင်ဘူးဘူး။
5 Nov 08, 04:45
kom: ဒါက လက်ကောက်
kom: အောင်မယ်။ ပုတီးတွေ ပါနော်။ မသိရင်ခက်မယ်။
kom: ပင်ပန်းလွန်းလို့ ညက ဖလက်ပြသွားတယ်။ အခု မှ လာကြည့်ရတယ်။ဆောရီး။
မပန်ဒို ပုံတွေလှတယ် ။ ဘယ်နေရာမှာ ရိုက်တာလည်း ၊ မခင်ဦးမေ ကတော့ မူစတဖာလို့ ဟောကိန်းထုတ်နေတယ် ။ ပုံ ၁ ။ ၂ ။ ၅ ။ အဲဒီသုံးပုံက ပိုမိုက်တယ် ။
သေချာတယ်.. ဒါ Mustafa...
ဒါပေမယ့် ပန်ပန့် လို Idea မျိုးမရှိလို့ဒီလိုပုံမျိုးမရခဲ့တာ...။ Nice Idea ပန်ပန်...
ဒေါ်လေး ..ဓာတ်ပုံဆရာမလုပ်လို့ ရပြီး ပုံတွေတော်တော်လှတယ် လက်ကောက်တွေက ကုလားမလေးတွေဝတ်တာဖြစ်မယ်နော့် :)
အလုံးလေးတွေ အ၀ိုင်းလေးတွေ .. artistic ဖြစ်တယ် .. ကြိုက်၏ ကြိုက်၏ ။ ဒါက mustafa ဖြစ်ဖို့ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ကြိမ်းသေတယ်း)
ပုံ ၁ နဲ့ ၂ ကို သဘောကျပါသည်။ ပုံ၂မှာ တံဆိပ်မပါရင် ပိုကောင်းမည်။ ကင်မရာကောင်းကောင်း ထပ်ဝယ်ပါလေ... :P
ပုတီး ပုံတွေကကောင်းလွန်းလို့ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းလားတောင်ထင်မိသေးတယ်။လက်ကောက်တွေ တွေ့ မှဓာတ်ပုံမှန်းသိသာတယ်။ဂျူရောင်းရှော့ပင်စင်တာ အပေါ်ဆုံးထပ်ကဆိုင်ထဲမှာဖြစ်နိုင်သလို
Bras Basha Complex မှာတော့အဲလိုဆိုင်တွေ တွေ့ ဖူးတယ်။
ပုလဲသီတကွဲစီတဲ့...ကမာတွေရဲ့ မျက်ရည်လို့ ဆိုသမို့ ......
တို့ လဲ မူစတာဖာလို့ထင်တယ်…
မူစတာဖာက ကုလားကုန်တိုက်ထဲမှာ အဲဒါတွေကို မြင်ဖူးတယ်။ အများကြီး ရှိနေတာလဲ ပါလို့ အဲဒီနေရာပဲ ထင်မိတယ်။
စတုဂံများ၊ စတုရန်းများ (လေးထောင့်များ)
အံစာတုံးများ၊ ဆလင်ဒါများ၊ ကတော့ချွန်များ
ကြည့်ရမယ်လို့ ယူုဆပါတယ်။း)
ပုတီးလေးတွေကို ကြည့်ရင်း စဉ်းစားမိတာက အလုံးညီမှ အရောင်တူမှ တကုံးတည်းဖြစ်အောင် အတူသီလို့ ရတာပါလားလို့။ ရောင်စုံ အရွယ်စုံ တကုံးတည်းသီကြည့်ရင်ကော..။ ကျနော်ကတော့ တမျိုးလှနေအုန်းမှာလို့ ထင်မိပါတယ်။
အ၀ိုင်းတွေကို angle ချိုးပြီးရိုက်လိုက်၊ဟိုလိုရိုက်လိုက်
ပုတီးလေးတွေ လှပပြီး အသက်ဝင်လိုက်တာ....
ရွှန်းမီ-> thanks for your comment.
မမိုးချိုသင်း မခင်ဦးမေ မောင်တိန် သက်ဝေ ဂျစ်ဂျစ် ပီတိ ကမောင်ရင် မတန်ခူး julydream => mustafa မှာရိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်ကွယ်။
ဒူကဘာ => မျက်ရည်တွေလည်း လည်ဆွဲလုပ်ဆွဲတော့ လှတာပဲ။ မိန်းကလေးတွေက ဒီလိုပဲတွက်တာပဲ။
ကောင်းကင်ကို mirror => ချီးမွမ်းစကားများအတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကိုဝေလင်း => မတူညီတာတွေ အတူတူစီထားလည်း တမျိုးလှနေမှာ သေချာပါတယ်။
ကိုဆူး => ကဗျာလိုလို တခုတော့ တင်လိုက်ပြီနော်။